आजदेखि निषेधाज्ञाः के के गर्न पाइन्छ ? के के गर्न पाइँदैन ? • raradiodarpan.com
कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणको गतिलाई अवरुद्ध (चेनब्रेक) गर्न भन्दै सरकारले आजदेखि निषेधाज्ञा लागु गरेको छ । सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौंसहित १५ जिल्लामा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको हो ।
विवाह/व्रतबन्धमा सहभागी भई अन्यत्र जिल्लाबाट फर्कनुपर्ने भए चालकसहित बढीमा सात जनासम्मका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति पासका लागि निवेदन दिनु पर्ने छ ।
सञ्चारकर्मी/पत्रकारको हकमा सूचना संकलन तथा सम्प्रेषण गर्न सूचना विभागले जारी गरेको परिचयपत्र वा सम्बन्धित सञ्चारगृहले उपलब्ध गराएको परिचय पत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिइनेछ ।